Ogaden News Agency (ONA) – Cudurka Daacuunka oo Faro Ba’an Kuhaya Shacabka Ogadenia Kudhaqan.
Cudurka Daacuunka oo Faro Ba’an Kuhaya Shacabka Ogadenia Kudhaqan.
Wararka naga soo gaadhaya wadanka Ogadenia ee gacanta gumaysiga kujira ayaa sheegaya in shacabka kudhaqan wadanka Ogadenia ay qarka usaaran yihiin in ay baaba’aan kadib markay isugu darsameen Colaado, Abaaro iyo Cuduro dilaa ah.
Sida xogta aan kuhelay waxaa guud ahaan gayiga Ogadenia fara ba’an kuhaya cudurka daacuunka waxaana laga soosheegayaa in ay ilaa hada udhinteen boqolaal dad ah oo kusugan dacalada wadanka.
Gobolka Qoraxay oo kamid ah Gobolada ay dadka badan ku dhinteen ayaa lasheegayaa in todobaadkan ay kudhinteen dad aad ubadan oo caruur iyo waayeel ubadan kuwaas oo aan helin wax caawimaad ah oo kusaabsan latacaalida cudurka.
Tuulada Hadha oo Dagmada Shaygoosh katirsan ayaa lasheegayaa in maalin nimadii Jumcada ee lasoo dhaafay ay kudhinteen toban iyo dhowr qof oo geel jire iyo dadka deegaanka isugu jira waxaana lasheegaya in ay tuulada jiifaan dad aad ubadan oo la il daran cudurka daacuunka.
Sidoo kale deegaanada uu cudurku faraha ba’an kuhayo waxaa kamid ah Galadiid, Cadalay iyo meelo kale oo Gobolka Qoraxay kamid ah ama guud ahaan Gobolka oo dhanba.
Sidoo kale cudurkan ayaa laga soo sheegayaa in uu dad badan kulaayay meelo badan oo Ogadenia kamid ah kuwaas oo dhamaantood aan helin wax dawo ama dayactir ah oo kayimaada dhinaca xukuumada wayaanaha.
Sikastaba ha ahaatee dadka soomaalida Ogadenia ee kusugan wadanka Ogadenia ayaa kusugan xaalad adag oo aan lasaadaalin karin waxaana dadka kala qaybsaday abaar, colaad iyo cudur.